Sales - Executive Archives - Page3of5- Glory Assumption Space
Sales Executive - Male / Female (5) posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricants Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။
၁။ Sales Executive - Male / Female (5) posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ - ၃၀၀,၀၀ ကျပ် / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။
- မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို (သို့) သက်ဆိုက်ရာဒီပလိုမာရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
- အသက် ၂၇ နှစ်မှ ၃၀ ကြားဖြစ်ရမည်။
- Lubricant ပိုင်းအရောင်း အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။
- B2B ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
- English ဘာသာစကားအသင့်အတင့်ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- အသင်းအဖွဲ့ နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Sales Executive - Female (5)Posts
Salary Rang : 300000 - 350000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales Executive - Female (5)Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၃၅၀,၀၀၀ /ဗဟန်းမြို့နယ် ။
-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ - သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ် ရှိရမည် ။ -English ကျွမ်းကျင်ရမည် ။ - Promotion Item တွင် sales&marketing လုပ်ရမည် ။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male/Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Car Showroom Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Sales Executive – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်) /ဗဟန်းမြို့နယ် ။ -ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ -English Fluent ဖြစ်ရမည် ။ -Car Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ။ -သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေအကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည် ။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male/Female (2)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Sales Executive – Male/Female (2)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ -Bachelor degree holder -Basic computer skill i-office -Certificate on sales (or) marketing -Minimum3years in FMCG / cosmetics sales field
Sales Executive – Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Gems & Jewellery Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales Executive – Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၅ မှ ၃၅ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ပြီး အရောင်းပိုင်းအားစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - Jewellery လုပ်ငန်းတွင်အရောင်းအတွေ့အကြုံရှိသူ (သို့) အရောင်းပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပျူတာအခြေခံတက်ကျွမ်းပြီး တရုတ်ဘာသာစကား၊အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူကို ဦးစားပေး ရွေချယ်ပါမည်။
Sales Executive – Male (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Executive – Male (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ကမာရွတ်မြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Lubricant ပိုင်းဖြင့်လုပ်သက် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - တခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ - အင်ဂျင် 1500 CC မောင်းနိုင်ရမည်။ - Auto Manual မောင်းနိုင်ရမည်။ - ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive Male/Female (5)Posts/
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Sales Executive Male/Female (5)Posts/လစာ-၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ - Must beagraduate - Can be Male or Female - aged minimum 26 and Older - Must be able to doapresentation (able to use computer well), - Email,Excel,Word - Must be able to send report in word and excel - Must haveavery good interpersonal skill and also good PR skill - Pleasant looking - Must be able to travel often (go to see customers in other cities and espescially Mandalay).Not Living in other cities but travel - Must have at least3years or more in the sale related area
Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male /Female (5)Posts
1.Sales Executive – Male /Female (5)Posts/ လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - Sales & Marketing နှင့်ပတ်သက်သည့် Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၅ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male - (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Executive – Male - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ကမာရွတ်မြို့နယ်။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Lubricant ပိုင်းဖြင့်လုပ်သက် ရှိရမည်။ • တခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ • အင်ဂျင် 1500 CC မောင်းနိုင်ရမည်။ • Auto Manual မောင်းနိုင်ရမည်။ • ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်း မြို့နယ်ရှိ Jewellery Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Sales Executive – Female (5)Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မရမ်းကုန်း မြို့နယ်
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။
English Skills ရေးဖတ်ပြောနိုင်ရမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကမာရွတ် မြို့နယ်ရှိ Lubricant Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Executive – Male - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ကမာရွတ်မြို့နယ်။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Lubricant ပိုင်းဖြင့်လုပ်သက် ရှိရမည်။ • တခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ • အင်ဂျင် 1500 CC မောင်းနိုင်ရမည်။ • Auto Manual မောင်းနိုင်ရမည်။ • ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။
Sales Executive – Male / Female (5)Posts
- Must beagraduate - aged minimum 25 and Older - Must be able to doapresentation (able to use computer well), - Email, Excel, Word - Must be able to send report in word and excel - Must haveavery good interpersonal skill and also good PR skill - Pleasant looking - Must be able to travel often (go to see customers in other cities and especially Mandalay). Not living in other cities but travel - Must have at least2years or more in the sale related area
Sales Executive (Inbound) - Male/Female -5Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ အလုံမြို့နယ်
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အလုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Travels & Tours ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ Sales Executive (Inbound) - Male/Female -5Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ အလုံမြို့နယ် • အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ တခုခု ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ • Travel & Tour Operation တွင် Inbound Sales ဖြင့် အနည်းဆုံး (2)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အတွေ့ အကြုံရှိရမည်။ • English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • Tour Itinerary Planning ပိုင်နိုင်၍ Quotation ကျွမ်းကျင်စွာ တွက်ချက်တတ်ရမည်။ • Computer Skills (Microsoft Word, Excel, Power Point, E-mail & Internet) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • လိုအပ်လျှင် ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • Customer များအတွက် ၀န်ဆောင်မှုကို အလေးပေးတတ်ပြီး၊ စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ လိုအပ်သော ခရီးစဉ်သစ်များကို ဦးဆောင်ရေးဆွဲနိုင်သူ၊ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး Team Work ဖြင့် ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်နိူင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။  Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။  E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com  Phone Number - 09- 262223783 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784  Viber Phone Number – 09263121101 ,09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ) ။
Sales Executive-Male(5)Posts/ လစာ -၂၅၀,၀၀၀/- ကျပ်/ကမာရွတ်မြိုနယ်
Sales Executive-Male(5)Posts/ လစာ -၂၅၀,၀၀၀/- ကျပ်/ကမာရွတ်မြိုနယ်။ -တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -အသက်၂၂ နှစ်မှ၃၀နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ -သက်ဆိုင်ရာအတွေ့ အကြုံအနည်းဆုံ(၂)နှစ်ရှိရမည်။ -Lubricant ပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဦးစားပေးမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်
ှSales Executive - Male/ Female (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
2. Sales Executive – Male / Female (5) Posts/ လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - Chinese Writing and Reading ကျွမ်းကျင်ရမည်။